Posted by ညီလင်းသစ် au 13.1.10
သားကလေး ဓာတ်ပုံများ ပါမလားလို့အေ... တကတဲ..
ညီလင်းသစ်ရေ လာဖတ်သွားပါတယ်။ မိမိကလေး ပျော်သလို မြန်မာပြည်က ကလေး ပျော်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒကို လေးစားပါယတ်။ ဆစ်ဒနီမှာတော့ နှင်းမရှိဘူး အခုချိန် နွေရာသီမို့ ရာသီဥတု သိပ်ပူတယ်။
အမမေငြိမ်းရေ...သားဓါတ်ပုံက ကင်မရာထဲကနေ ကွန်ပျူတာထဲကို မထည့်ရသေးလို့ပါ ခင်ဗျ... :) မကြာမီ လာမည် မျှော် လို့သာ ဆိုချင်ပါကြောင်း... :D
ကျနော်တို့နဲ့ မငယ်နိုင်တို့နဲ့က ရာသီဥတုချင်း တကယ့်ကို ဆန့်ကျင်ဖက်...၊ ဆစ်ဒနီက သူငယ်ချင်းကို ကျနော်အမြဲ နောက်လေ့ရှိတယ်၊ “ခရစ္စမတ် tree ကို ယပ်ခတ်ပြီး ထိုင်ကြည့်ရတာ သိပ်တော့မနိပ်ဘူးကွာ” လို့..။ :)
ရှိရင်နောက်တင်ပေးပါအုန်း.. ။ ကျွန်တော်က နှင်းတွေကို မြင်ရရင် သဘောကျတယ်..။ အဲ့ပ်လ်စ်တောင်တန်းတွေလည်း ကြည့်ချင်သား.....။ အစ်ကို တင်ထားတဲ့ မွန်းတည့်ချိန်ရဲ့ဓါးသွားများကို အရမ်းကြိုက်တယ်..။
မှားလို့ မွန်းတည့်ချိန်ဧ။်သွားများကို ပြောတာပါ..။
ကိုဖြိုး... ပုံတွေ ကျနော်ပြန်ရှာလိုက်ဦးမယ်၊ အဲ့လ်ပ်စ် တောင်တန်းနဲ့ နှင်းတွေကို မြင်ချင်ရင် ဆောင်းတွင်း တချိန်ချိန်လောက် ကျနော်တို့ဆီ လာခဲ့လေ... :)
အဲဒီအခါ ကြည့်ချင်သလောက်သာ ကြည့်ပေတော့ဗျာ။
Oh NLT, when I had seen "snow" for the 1st time, I thought the same.. wanted snowing in Myanmar instead of dust. & imagine all people, children or adults would be very happy like me. :D
Ah harr...I remembered suddenly northern MM & smiled at myself :D
Yeah..I think we guys think in the same way. :)
When there are some global climate disasters, then there will fall snow in Burma... LOL.